वार्तालाप:दान सूक्त - विकिपिडिया
२ सूक्त– दान, ऋषि– अंगिरस, छन्द– त्रिष्टुप, जगती
३ विषय वस्तु
दानसूक्त (ऋग्वेद १०.१२७) का ऋषि अंगिरस हुन् । यसको छन्द त्रिष्टुप जगती हो । संस्कृत शब्द दानको अर्थ हुन्छ– दिनु, वितरण गर्नु, भुक्तानी गर्नु, पुरस्कार दिनु । आधुनिक अर्थशास्त्रमा उत्पादनका साधनहरुको पारिश्रमिकलाई जुन शब्द प्रयोग गरिन्छ, त्यो दानसंग मिल्छ । उत्पादनका साधनहरुले आफ्नो योगदान अनुसार प्राप्त गर्ने प्रतिफल (ज्याला) लाई अर्थशास्त्रमा रिवार्ड (पुरस्कार) भन्ने गरिन्छ । यस अर्थमा पनि यो सूक्त आर्थिक अवधारणायुक्त छ ।
सूक्त– दान, ऋषि– अंगिरस, छन्द– त्रिष्टुप, जगती[सम्पादन गर्ने]
यस सूक्तमा नौवटा ऋचा छन् । यस अनुसार–
यस ऋचाको अर्थ सम्पत्तिको एक पद, दुइ पद भन्ने अर्थ केवल सातवलेकरले गरेका छन् । अरु भाष्यमा त्यसरी अर्थ गरिएको छैन । ऋग्वेदका अनेक ऋचाहरु यस्ता छन्, जसको व्याख्या केवल सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञले मात्र गर्न सक्छ । केवल शब्दार्थ गर्नाले त्यसका अर्थ स्पष्ट हु“दैन । अर्थ लगाउ“दा वैदिक संस्कृति, परम्परा सबैकुरालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ । उदाहरणका लागि गङ्गाजल र खोलाको पानी दुवै प्रयोग गरिने शब्द जल र पानी समानार्थक हुन् तर गङ्गासंग जोडिएकोले त्यहा“ जलको अर्थ सामान्य पानी होइन एक विशेष, पवित्र पानी हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यो कुरा वेदका सबै मन्त्रका सन्दर्भमा सत्य छ । उदाहरणका लागि वाचस्पति गैरोलाले यस ऋचाको सार यस प्रकार व्यक्त गरेका छन्– के ईश्वरका हातमा मानिसका लागि एक मात्र दण्ड भोक हो ? यदि देवताको त्यही इच्छा हो भने धनीहरु अमर किन छैनन् ? मूर्ख (धनी) कहा“ भोजन जम्मा भएर कसैको भलाई हु“दैन । उसले आफैं मात्र पेट भर्छ, आफ्ना इष्ट मित्रलाई पनि खान दिन्न । संसारले त्यसलाई धिक्कार गर्छ । गैरोलाको यस अर्थमा आर्थिक अवधारणा कतै प्रयोग भएको छैन । यसको एक कारण के भने उनी भाषा विषयका विद्वान् हुन्, आर्थिक विषयका होइनन् । तर अर्थशास्त्रका सबै विद्यार्थीहरुले यसमा निहित आर्थिक दृष्टिकोण सजिलै अनुमान गर्न सक्छन् ।
यस सूक्तका प्रत्येक ऋचामा आर्थिक अवधारणा प्रयोग गरिएको छ । पहिलो ऋचामा भोकलाई तीव्रतम आवश्यकताको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस्तै शब्दावली मालथसले आफ्नो जनसंख्या सिद्धान्तमा प्रयोग गरेका छन् । उनले भनेका छन् जनसंख्या खाद्य सामग्रीद्वारा नियन्त्रित हुन जान्छ । दोस्रो ऋचामा आवश्यकता पूरा भएमा सुख प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा बताइएको छ । यो अर्थशास्त्रको अधिकतम सन्तुष्टिको सिद्धान्त हो । आज पनि खानेकुराको उदाहरणद्वारा सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त र अधिकतम सन्तुष्टिको सिद्धान्त व्याख्या गर्ने प्रचलन छ । यस सूक्तका तेस्रो, चौथो, पा“चौं र छैठौं ऋचामा के कुरा स्पष्ट गरिएको छ भने अर्थव्यवस्थामा साधनहरुको आपूर्ति सक्षम व्यक्तिहरुले गर्नु पर्छ । यो आपूर्ति कसरी गर्नु पर्छ भने साधनहीन व्यक्तिहरुका हातमा साधनहरु उपलब्ध हुन जाउन् । यो आर्थिक विकासको निर्देशक सिद्धान्त नै हो । सातौं ऋचाले उत्पादनमा वृद्धि गर्न खर्च र लगानी बढाउने कुरा स्पष्ट बताएको छ । आठौं ऋचाले अर्थव्यवस्थाका क्षेत्रहरुमा हुने विकास क्रमलाई स्पष्ट गरेको छ । नवौं ऋचाले दुई उपभोक्ताको उतपदन क्षमतामा अन्तर भए जस्तै दुइ श्रमिकको उत्पादन क्षमतामा पन अन्तर हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेका छन् । संक्षेपमा, भिक्षु अंगिरसले यस सूक्तमा गहनतम आर्थिक विचार व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले उनलाई प्रथम आर्थिक विचारक स्वीकार गर्न सकिन्छ ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=वार्तालाप:दान_सूक्त&oldid=530794" बाट निकालिएको
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०५:५९, १२ फेब्रुअरी २०१६ मा परिवर्तन गरिएको थियो।